FANKALAZANA NY AÏD EL-FITR TETSY AMIN’NY MOSKE 67HA : Nokorontanin’ny mpanolotsain’i Mahafaly Olivier
Korontana niafara tamin’ny fahatezeran’ireo mpino silamo no nitranga teo anoloan’ny Moske tetsy 67ha Atsimo, omaly maraina. 5 juin 2019
Tonga teny an-toerana nanakorontana ny fotoam-bavaka hoentina hanamarihana ny fankalazana ny aïd el-fitr i Abdoul Hady, mpanolotsain’i Mahafaly Solonandrasana Olivier. Tsy zoviana amin’ny rehetra ity farany fa Praiminisitra tamin’ny andron’ny Hvm, nanana ny laza ratsiny.
Araka ny tetiandro mifandraika amin’ny fitodiky ny volana ho an’ny finoana silamo dia omaly no nifarana ny volana ramadany. Maro tamin’ireo mpino silamo no nanamafy izany. Omaly io ihany, araka ny tokony ho izy no voatondro hankalazana ny aïd el-fitr ho an’ireo mpino silamo nanaja ny volana ramadany nandritra ny 40 andro. Nifamahofaho be ihany anefa ny zava-nisy. Efa namoahan’ny fitondram-panjakana didy fa ny datin’ny 4 jona dia andro tsy fiasa fa andraisan-karama ho an’ny rehetra, noho io andro io manan-danja ho an’ny finoana silamo.
Nivadika ho 5 jona indray anefa izany satria voalaza fa izay no mifanandrify amin’ny tetiandro voafaritra. Manoloana izany indrindra no nisehoan’ny olana tetsy amin’ny Moske Palestine 67ha Atsimo. Nisy tamin’ireo mpino silamo no nitazona ny datin’ny 4 jona. Omaly maraina, raikitra ny savorovoro teny an-toerana. Nikasa hanakana an’ireo mpino silamo hanatanteraka ny fotoam-bavaka hoentin’izy ireo hanamarihana ny fankalazana ny aïd el-fitr i Abdoul Hady mpanolotsaina manokan’ny praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny ekipany. Niatrana avy hatrany teny an-toerana ny mpitandro filaminana nisahana ny filaminana mba hampizotra amin’ny antsakany sy andavany ny fotoam-pivavahana rehetra tao amin’ny Moske. Fantatra fa tsy ankasitrahan’ity mpanolotsaina manokan’ny Praiminisitra tamin’ny fitondrana Hvm ity ny hankalazana ny aïd el-fitr ho an’ny andron’ny omaly.
Ity farany no voalaza fa nanova ny daty ho amin’ny anio ary nisy tamin’ireo mpitarika sy tompon’andraikitra sasantsasany teo anivon’ny Moske eto Antananarivo ihany koa no nanatanteraka fivoriana teny Ankadivato, ny alahady lasa teo izay nanapahan’izy ireo fa androany ny fetin’ny aïd el-fitr. Ity fanapahan-kevitra ity anefa dia mifanohitra amin’ny fampianarana mozilimanina. Ny alatsinainy lasa teo ihany koa taorian’ny fotoam-bavaka “Icha” dia nanambara ny Imam etsy amin’ny Moske 67 Avaratra fa mbola tsy hita eto Madagasikara ny volana, noho izany, hoy izy dia andron’ny anio no hankalazana ny aïd el-fitr.
Voalaza fa diso anefa izany satria faritra maro no efa nahitana izay fiposahan’ny volana izay toy ny any Marovoay, Morondava, Ampasindava dia efa nahita ny fivoahan’ny volana Chawal, volana manaraka ao aorian’ny ramadany avokoa. Ankilany, ireo mpino silamo tany Arabia Saodita dia efa nankalaza izay aïd el-fitr izay omaly. Tao anatin’ny taona maro dia firenena maro no nanaraka hatrany an’i Arabia Saodita teo amin’ny fanombohan’ny volana ramadany sy ny fiafaran’izany. Ity fihetsika nasehoan’i Abdoul Hady tetsy amin’ny Moske 67ha ity dia melohin’ny fikambanan’ny silamo Malagasy (Fsm) tanteraka. Marihina fa ny fotoam-bavaka izay notanterahina noentina nanamarihana ny aïd el-Fitr anio tetsy amin’ny Moske dia notarihin’ny Imam Younouss ary natrehan’ireo masoivohon’ireo firenena mozilimana.
Handray ny andraikitra ny Fsm
Manoloana indrindra io savorovoro io dia mandray ny andraikiny tanteraka ny eo anivon’ny fikambanana silamo Malagasy na ny Fsm. Notsindrian’ny filoha lefitry ny fikambanana, Absoir Said Arsène fa ny tena fiafaran’ny volana ramadany dia ny datin’ ny talata 4 jona. Andro izay efa namoahan’ny fitondrana didim-panjakana fa tsy hiasa ho an’ny olon-drehetra fa handraisan-karama. Nohamafisiny ny filazana fa efa hita ny volana izay manamarika ny fiafaran’ny andron’ny ramadany. “Ilay volana vaovao dia efa tazana tany Morondava, Marovoary ary Ampasindava ny harivan’ny alatsinainy lasa teo. Noho izany dia tsy ilaina intsony ny fanaovana resabe mahakasika ny fiafaran’ny volana ramadany”, hoy ny fanazavana noentin’ny filoha lefitry ny Fsm, Absoir Said Arsène. Notsipihiny fa tsy manao politika ny finoana silamo ary tokony hanaja ny fepetra rehetra mifehy ny finoana silamo ireo mpino ao aminy.
Eo anatrehan’ireo fanasana naparitaka amin’ny anaran’ny fikambanana Fsm ho fanamarihana ny fetin’ny aïd el-Fitr anio dia nilaza ny tenany fa handray ny andraikiny raha toa ka misy ny endrika tsy fanarahan-dalàna sy tetika hanaovana politika ao anatin’izany. Ankilany, nitondra fisaorana ho an’ny governemanta ny mpikambana eo anivon’ny fikambanana faribolana mpandinika ny sehatra mozilimanina, Moussa Soilihy noho ny fahafahana nomeny ho an’ny fivondronam-ben’ny silamo na dia vitsy an’isa aza izy ireo eto Madagasikara. Mialoha io dia nisy ny fanazavana fohy noentiny mahakasika ny finoana silamo sy ny volana ramadany.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (142) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (93) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (90) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (81) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (79) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (69) 22 mai 2020